Nhọrọ nke akwụkwọ akụkọ nchọpụta kacha mma
Nyocha nke akwụkwọ akụkọ nchọpụta
Akwụkwọ kacha mma 3 nke Franck Thilliez dere
Franck Thilliez bụ otu n'ime ndị na -eto eto na -ede akwụkwọ na -ahụ maka ịtụgharị ụdị ụdị. A mụrụ neopolar, ihe dị n'okpuru akwụkwọ akụkọ mpụ ndị France na 70. Maka m, ọ bụ akara ọjọọ, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ. Mana ụmụ mmadụ dị otu a, iji chepụta ya na ikewa ya ...
Ndị ohu nke Ọchịchọ, nke Donna Leon dere
Onye edemede America bụ Donna Leon sitere n'ebube akụkọ ya maka mmasị o nwere na Venice. Afọ iri abụọ na abụọ ka amalitechara ịdọrọ eriri mbụ ya site n'aka Kọmịshọna Brunetti site na ọwa mmiri, eriri egosipụtara emeela Venice ka ọ bụrụ nnukwu ikpe ikpe. Ịdị n'otu ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke John Verdon
Enwere ike ikwu na John Verdon abụghị ezigbo onye edemede, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ nweghị ike ịrara onwe ya nye ide ihe site n'ịba ụba nke ndị ode akwụkwọ ndị chọpụtalarị ọrụ ha site na nwata. Mana ihe dị mma gbasara ọrụ a bụ na ọ bụghị ntụzịaka afọ, ma ọ bụ ...
Mpụ nke Saint-Malo, nke Jean-Luc Bannalec dere
Ihe niile yiri ka Jörg Bong na -amụ ya nke ọma. Site na pseudonym a ga-eji mee ihe, Jean-Luc Bannalec, ruo na ọnụ ọgụgụ kọmishọna Dupin gafere akwụkwọ ma bụrụ ihe na-emegharị ugboro ugboro nke na-eji echiche na-adọrọ mmasị na-ebuso echiche oge okpomọkụ. N'ihi na site n'aka onye Britain Brittany wakporo ụsọ mmiri ya niile ...
Ezigbo ụmụaka, nke Rosa Ribas dere
Nke ahụ bụ ihe ọbụla ezinụlọ kacha mma gbasara. Ọdịdị na -achị. Nke ahụ bụkwa kpọmkwem ihe kpatara nke a bụ ebe ịnọpụ iche na ikewapụ onwe ya na ihe kwesịrị ịbụ akara, n'ihi na n'oge gara aga ihe niile dị nnọọ iche. Ọ dị mgbe ezinụlọ na ntụkwasị obi, yana ezi obi. Ihe niile gbapụrụ ...
Amaokwu maka onye nwụrụ anwụ, site na Lincoln na Nwa
Ndị otu nrọ nrọ, Douglas Preston na Lincoln Child, na-alaghachi na ntinye nke narị otu onye nyocha Pendergast nke ga-aga n'ọnụ ọnụ mbibi mgbe ọtụtụ ikpe na eriri eriri. Mana ọ bụ ihe ndị ọrụ pụrụ iche nwere, ha abụghị onye na -enweghị esemokwu, ...
Quirke na San Sebastián, nke Benjamin Black dere
Mgbe Benjamin Black mere ka John Banville mara na nkeji Quirke ọzọ ga -ewere ọnọdụ na fim Donosti ama ama, ọ maghị etu okwu ahụ ga -esi gaa nke ọma. Maka na ọ nweghị ihe dị mma karịa ụda mmepe nke atụmatụ juputara na ọdịiche dị ka San Sebastián n'onwe ya, yabụ ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji9 Ọzọ →